Wiki Wareegsan: Xaqiiqda ama Maqalka? - Sare Lacagta Lacagta La'aanta
Julia Vashneva, oo ah Maamulaha Guud ee Maareynta Maamulaha Guud ee Macaamiisha, ayaa sheegaya in cilmi-baarayaasha iyo culimada ka socda Dugsiga Harvard ee ganacsiga ay dhawaan sameeyeen daraasad dara ah oo loogu talagalay in lagu barbardhigo xogta macluumaadka Wiki iyo Encyclopedia Brittanica. Cilmi-baadhayaashu waxay qiimeeyeen in ka badan 4,000 oo maqaalo ah Ingiriisi ku salaysan oo diiradda saaraya mawduucyo muran badan sida Siyaasadda Maraykanka.
Feng Zhu iyo saaxiibkiisa Shane Greenstein, ayaa ku qeexay in ka badan 4,000 oo maqaallo ah sida "casaan" ama "buluug," si loo soo gabagabeeyo siyaasadda bilawga ee sannadka 2012 - дешевая мягкая мебель. Wareysiga, Shane wuxuu muujiyay mahadnaq ku saabsan guusha Wikipedia, inkastoo kala duwanaanshaha siyaasadeed ee u dhaxeeya Democrats iyo Jamhuuriyaanka.
Shane Greenstein iyo Feng Zhu labadaba waxay tilmaameen erayada muhiimka ah inta badan ee ay isticmaalaan dhinac kasta, si ay u soo qaataan gabagabada siyaasadda siyaasadeed. Wiki waa websiteka ugu booqashada badan ee adduunka, sidaas darteed cilmi-baarayaasha iyo culimada ayaa qeexay odhaahyo muhiim ah oo u ahaa labada dhinac ee xisbiyada iyo dimuqraadiyada labadaba
Jamhuuriyeyaashu waxay u badan tahay inay isticmaalaan weedho muhiim ah sida 'soogalooti' iyo 'barwaaqo dhaqaale.' Dhanka kale, Democrats waxay u badan tahay inay isticmaalaan 'xuquuqda madaniga' iyo 'xaaladda dagaalka'. Inta lagu jiro marxaladda ugu horreysa, maqaallada iyo qoraallada badankood waxay soo qaadeen dhinaca fikradaha xorta ah, markaa waxay muujinayaan qaab cayiman marka la barbardhigo Britannica.
Su'aasha ayaa la kordhiyay iyada oo muujinaysa in tifaftireyaasha iyo mutadawiciinta leh dareenka buluuga ah ay soo booqdaan maqaallada buluuga ah iyo kuwa kale. Juliet Barbara ayaa u sheegay Quartz in aragtiyada isku dheelitiran iyo iskaashiga iskaashi ay muujiyeen. Natiijooyinka waxaa taageeray cinwaanada IP-ga booqanaya goobta. Wikipedia oo ah arin dhexdhexaadin ah laguma dhaqaaqin natiijooyinka.
Barbara sidoo kale waxay qeexday in Wikipedia uu ka shaqeynayay sidii loo ogaan lahaa khilaafka ka dhex jira tifaftireyaasha iyo dadka isticmaala, iyo in laga takhaluso xakamaynta. Dhawaan, Wiki waxay soo saartay xeerar iyo tilmaamo lagu dajinayo isticmaalaha ku saabsan sida dib-u-eegis loogu sameeyo mowduuc gaar ah. Sida laga soo xigtay Greenstein, sameynta iyo wax ka beddelida maqaalada waxay u baahan tahay ilo lagu kalsoonaan karo iyo ilaha hoose. Bulshada Wikipedia ma ogolaanayo mutadawiciin iyo qoraayada in ay isbedel ku sameeyaan maqaayadaha cilmiga ah ee fikradaha ku jira.
Ku-biirayaasha iyo tifaftirayaasha leh fikrado siyaasadeed oo kala duwan oo ku saabsan wadahadalka online-ka ah ayaa ah dhacdo xaalad ah oo keentay guusha Wiki ee macaamiisha siinaya aqoon bilaash ah aduunyada oo dhan. Cilmi-baarayaasha siyaasadeed iyo kuwa soo-booqdayaasha ah ee ka fakaraya Wikipedia ayaa ah qayb ka mid ah shabakadda internetka, baadhitaan ay samaysay dhowaan ay sameeyeen qorayaasha ka socda Dugsiga Harvard School of Business oo kale. Sida laga soo xigtay daraasadda kiisaska, Wikipedia waa mid ka mid ah mareegaha ugu fiican ee internetka ah ee u shaqeeya sidii macquul u ah macaamiisha leh fikrado kala duwan oo mawduucyo muran leh.